Álvaro Arbeloa oo ku jees jeesay Lionel Messi kadib guuldaradii Croatia – Gool FM
Álvaro Arbeloa oo ku jees jeesay Lionel Messi kadib guuldaradii Croatia
Dajiye June 22, 2018
(World Cup) 22 Juunyo 2018. Álvaro Arbeloa ayaa bartiisa Twitter-ka wuxuu kaga careesiiyay jamaahiirta Barcelona iyo kuwa Argantina, kadib markii uu sheegay in Lionel Messi uusan ahayn kan ugu fiican aduunka.
Xulka qaranka Argantina uu hogaaminayay Lionel Messi ayaa kala kulmay dhigooda Croatia guuldaro xanuun badan ee 3-0 ah taasoo keentay in laacibka kooxda Barcelona uu la kulmo dhaleeceen xoogan.
Hadaba Álvaro Arbeloa ayaa ka faa’ideestay guuldaradii 3-0 ahayd ay la kulmeen Lionel Messi iyo saaxiibadiis wuxuuna kaga careesiiyay bartiisa rasmiga ah ee Twitter-ka, jamaahiirta xulka Argantina iyo Barcelona.
“Luka Modric waa ciyaaryahanka ugu fiican aduunka”.
Shaxda rasmiga ah ee Serbia vs Switzerland
Ahmed Musa oo ku guulaystay abaal marinta xiddiga garoonka kulankii Iceland